Global Voices teny Malagasy » Senegaly: Hetsika “Leo izahay” hatreny an-tranokala ka hatrany an-dapam-panjakana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 22 Avrily 2011 4:30 GMT 1	 · Mpanoratra Philippe Léveillée Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Senegal, Fanoherana, Fitantanam-pitondrana, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Mozika, Politika, Tanora
Nandritra ny hetsiky ny revolisiona arabo, nahita ny fandraisana andraikitra maromaro an'ireo tanora tezitra amin'ny aterineto  ny tranokala senegaley. Nanomboka ny volana martsa, nivoaka ny tranonkala ny fanentanana ary lasa mpitarika ny fanoherana “ny mpifarimbon'asa Y en a marre”.
Natsangana tamin'ny volana janoary 2011 ny “Leo izahay” noho ny hakiviana nivangongo manoloana ny fahatapahan-jiro miverimberina mahazatra ny ao Senegaly. Nipoitra tamin'ny tanàna manodidina an'i Dakar ireo fikambanana mpifarimbon'asa ka miara-miasa amin'ireo mpiangaly rap maromaro ao an-toerana tahaka an'i Fou Malade, Thiat ao amin'ny tarika Keur Gui sy i Matador. Lahatsoratra ao amin'ny Afrik.com mampiseho ny tahirin-tantaran'ny fihetsiketsehana .
Ao amin'ny pejiny Facebook, mahitsy ireo fikambanana amin'ny fitakiany :
Tsy fotoanan'ny fitarainana intsony izao sy alahelo manaiky lembenana manoloana ny fahatapahan-jiro. Toherintsika ny fomba fitantanana ampiharina eo amin'ny tokantranontsika mikasika ny fampandehanana ny jiro. Feno ny kapoaka: LEO IZAHAY﻿
Nanomboka hatreo, nanjary lasa fihetsiketseham-panentanana ny tanora ny fahatezeran'ireo fikambanana mpifarimbon'asa noho ny fahatapahan-jiro. Tsy fisian'ny asa marobe, famoretan'ireo polisy, kolikoly: niampanga ny fihetsiketsehana fa indrindra kosa mbola miezaka mampandray anjara ny hafa hatrany.
Tamin'ny 19 martsa farany teo, nivoaka ny tranonkala ny“leo izahay”, nanentana ireo tanora dakaroà amin'ny fampisehoana fihetsiketsehana ao amin'ny toerana Obélisque ao Dakar. Hain'ireo mpanentana tokoa ny nampita ny hafatra: t-shirts mainty misy soratra fotsifotsy hoe “leo izahay» izay zaraina ho an'ireo vahoaka marobe, teny tarigetra hirain'ireo mpiangaly rap, fampiasana ny fomba fitenin'ireo vahoaka sy ny wolof. Vokatr'izany: tanora an-jatony maromaro feno fientanana , ary indrindra koa tsy nisy ny baomba mampadatsa-dranomaso nalefan'ireo mpitandro ny filaminana izay nitsikilo tao. (Horonantsary )
Tao anatin'izany, nametraka tanjona vaovao ny fikambanana mpifarimbon'asa: entanina ireo tanora ary omena fitenenana izy ireo ho fanomanana ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2012. Nodinihan'ireo mpanentana ny hafatra ka namoaka teny tarigetra vaovao izy hoe : «ny kara-pifidianako, ny safidiko». Amin'ny 15 aprily hoavy izao, hanao fanentanam-pirenena Daas Fanaanal izy ireo izay mikendry ny hampaherezana ny tanora hifidy kanefa tsy misy anohanana antoko etsy na eroa ao anatin'izany.
Nanosika tanora senegaley marobe ny fanapaha-kevitra amin'ny fanehoana ny fanohanany amin'ny alalan'ny Facebook na Twitter, tahaka ity lahatsoratra nataon'i Mamadou Dieye  ity:
Leo tahaka ny maro an'isa amin'ireo tanora 1 400 000 afaka mifidy dia tsy handeha hisoratra anarana amin'ny lisi-pifidianana. Mavitrika ery rehefa mitsikera, saiky tsy dia mpandray anjara loatra. Tsy ho lavorary ny tanjon'ny “leo izahay” raha tsy vitany ny fanesorana ny fikasan'ny minisiteran'ny Atitany mikendry ny tsy hahatafiditra ny anaran'ireo tanora izay tsy mankasitraka ho ao anatin'ny lisi-pifidianana!
Tsy hisalasala hitoraka balatafondro amin'ny governemanta Wade ny “leo izahay”. Tsy hoe tsy miraharaha ity farany ity . Nilaza ny mpifarimbon'asa fa mizaka ny faneriterena sy fandrahonana avy amin'ny fitondrana izy ireo. Nofoanana ny fihaonana tamin'ny mpanao gazety satria ny tompon'ny trano Janeer, toeram-pisotroana izay tokony hisian'ny fihaonana, dia nahazo baiko tany amin'ny polisy. Fitaovana fandraiketam-peo no nalain'ireo polisy nandritra ny famoriam-bahoaka tao Rufisque. Kanefa dia nahazo alalana avy amin'ny manam-pahefana nanantosa fihetsiketsehana izy ireo ny 19 martsa.
Thiat, iray amin'ireo mpanentana amin'ny fikambanana, nanazava fa ny mpifarimbon'asa dia fihetsiketsehan'olom-pirenena alohan'ny nahalasa azy ho mpanohitra ny Filoha Wade 
Sady tsy avy amin'ny ankolafy ny filoha izahay no tsy avy amin'ny mpanohitra, miaraka amin'ny vahoaka izahay ary mitsangana mandrakariva ho amin'ny fanajana ny demokrasia sy ny rafi-panjakana ao Senegaly. Raha ankehitriny, ny fihetsiketsehana ” leo izahay” no akaiky ny mpanohitra, nanaiky ireo nanapa-kevitra fa satria raisinay ny andraikitra amin’ izay maha-sahirana ny olom-pirenena.
Maniry fanovana ny fihetsiketsehana, teboka.
Ny fitomboan-dazany no nikendrena azy nandritra ny fetin'ny lainga . Namaly haingana ireo mpifarimbon'asa fa :
Tsy lainga ny “leo izahay”.
Afo-milolo sa revolisiona kely? Mbola tsy fotoana ny ahafantarana izay mety ho fiantrakan'ny fihetsiketsehana amin'ny fampielezan-keitra 2012 izao. Hita koa fa manelingelina ireo mpiangaly rapy dakaroà any amin'ny manodidina ny renivohitra. Ao Senegaly, nandritra ny fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny taona 2007, tonga tao amin'ny fihetsiketsehana ny fahafantarana manokana ny fahatanorana « Taranaky ny tena izy » miaraka amin'ny lohalaharana i Karim Wade, zanaka lahin'ny Filoha Wade izay 39 taona tamin'izany. Ny any azo lazaina dia tsy mavitrika ireo tanora amin'ny resaka politika ao Senegaly.
Tsy antso ho amin'ny fanonganana ny governemanta ny ” leo izahay” fa mitaky ny fanajana ny demokrasia sy ny tsy fisian'ny herisetra. Amin'ny alalan'ny fifidianana no mety ahazoana izany revolisiona izany. Nanamafy izy fa matoky ny fahefan'ny vato nalatsany, ary indrindra fa tsara fanombohana ny fampielezan-kevitra amin'ny fifidianan filoham-pirenena ary amin'ity indray mitoraka ity, dia hijery fotsiny ny matso mandalo ireo tanora.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/04/22/16345/
 ny fandraisana andraikitra maromaro an'ireo tanora tezitra amin'ny aterineto: https://fr.globalvoicesonline.org/2011/03/11/60637
 tahirin-tantaran'ny fihetsiketsehana: http://www.afrik.com/article22245.html
 mahitsy ireo fikambanana amin'ny fitakiany: http://www.facebook.com/pages/Y-en-a-marre/173373102703740?sk=info
 tanora an-jatony maromaro feno fientanana: http://www.00221.info/tak2/manif-wade-1-opposition-0
 lahatsoratra nataon'i Mamadou Dieye: http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=188977314476652&id=173373102703740
 ny mpifarimbon'asa dia fihetsiketsehan'olom-pirenena alohan'ny nahalasa azy ho mpanohitra ny Filoha Wade: http://dakarpresse.com/home/laquo-y-en-a-marre-raquo-lance-laquo-daas-fanaanal-raquo-les-populations-appelees-a-leur-devoir-civique__17982#!/home/
 nikendrena azy nandritra ny fetin'ny lainga : http://www.seneweb.com/news/Societe/le-mouvement-y-en-a-marre-recu-au-palais-ce-vendredi_n_43239.html
 Namaly haingana : http://www.pressafrik.com/Y-en-a-marre-n-est-pas-un-poisson--replique-Thiat-sur-la-blague-portee-sur-le-mouvement_a53883.html